Xiddiga Shirkadaha Alaabada iyo Warshad - Soosaarayaasha Waxsoosaarka Shiinaha Xiddiga
Dambiisha Qalabka PP ee Mashiinka Goynta & Mashiinka tolida Oo buuxa
Boorsooyinka PP-ga lagu xidho mashiinka samaynta, goynta iyo tolida. Waa mashiin isku dhafan oo isku dhafan mashiinka jarista iyo mashiinka tolida. Waxay badbaadisaa foosha waxayna ka dhigtaa bacaha si fudud u soo saaraya.
Dambiisha Dhammaystiran ee Automatic PP Dhalmada Goynta & Dawaarka & Daabacaadda Mashiinka Isku-dhafan
Boorsooyinka pP-ga lagu xidho mashiinka samaynta, goynta, tolida iyo daabacaadda. Waa mashiin isku dhafan oo isku jira mashiinka jarista, mashiinka tolida iyo mashiinka wax daabaca. Waxay badbaadisaa foosha waxayna ka dhigtaa bacaha si fudud u soo saaraya.
Jarida otomaatiga ah & gelinta & tolida
Boorsooyinka pP-ga lagu xidho mashiinka samaynta, goynta, gelinta iyo tolida. Waa mashiin isku-dhafan oo isku dhafan mashiinka jarista, mashiinka gelinta iyo mashiinka tolida. Waxay badbaadisaa foosha waxayna ka dhigtaa bacaha si fudud u soo saaraya.
Dambiisha Qiimaynta Qiimaha otomaatiga ah ee PP oo Mashiinka Sameeya
Dambiisha Qiimaynta Qiimaha otomaatiga ah ee PP oo Mashiinka Sameeya. Baaxadda arjiga: bacaha sibidhka, bacda budada budada ah iwm.
PP-xidhkii Mashiinka Samaynta Bacda Sibidhka
PP-xidhkii tolmo wanaagsan mashiinka qaadashada bacda. Jiilka cusub ee xarkaha guntinta waalka hoose ee beddelaadda ayaa qaata tiknoolajiyada alxanka hawada kulul si loo soo saaro bacaha la tolay ee PP.
Dambiisha Hawada Hawada ee Buuxda oo Buuxda & Mashiinka Samaynta Dambiisha Hawada Dunnage
Bacaha haanta hawada ee otomaatiga ah oo buuxa & mashiinnada samaynta bacaha hawada ee dunnage-ka, samaynta bacaha haanta weelka iyo bacaha hawada ee dunnage-ka ee gaadiidka
Mashiinka ayaa ku habboon dhererka go'an, calaamadeynta iyo shaqada kulul ee bacaha dharka leh dherer siman.
Goynta Kulul iyo Goynta Qabow Dhammaan Hal
Mashiinkaani waa nooc la soo rogay, waa isku-dhafnaan aad u wanaagsan oo goynta kulul iyo goynta qaboojiyaha qabow. Goynta kuleylka iyo goynta qaboojiyaha qaboojiyaha ayaa si fudud oo habsami leh ugu beddeli kara hal daqiiqo iyada oo aan wax kala-goyn ah.